जसले फुटवल खेलेरै झापालाई चिनाए - Purbeli News
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण २८, २०७५ समय: ९:२१:१३
झापा / झापा गोल्ड कप मूल आयोजक समितिले तीन खेलाडीलाई सम्मान गरेको छ । डोमालाल राजवंशी रंगशालामा आयोजित झापा गोल्डकप समापनको अवसर पारेर फुटवलर गम्भीर राई , महिला फुटवलर अस्मिता खवास र नरेन्द्रमणि लिम्बूलाई सम्मान गरिएको हो । फुटवल खेलाडीलाई कांग्रेस नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सम्मान गर्नुभयो । खेल क्षेत्रको श्रीवृद्धिमा पु¥याएको योगदान स्वरुप उनीहरुलाई सम्मान गरिएको झापा गोल्डकप मूल आयोजक समितिका संयोजक महेन्द्रकुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
झापा गोल्डकप मूल आयोजक समितिद्वारा नगद २५ हजार सहित सम्मानित फुटवल खेलाडी वाँया तर्फ गम्भीर राई वीचमा महिला फुवलर अस्मिता खवास र लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवाड प्रदान गरिएका दायाँ तर्फ फुवलर नरेन्द्रमणि लिम्बू । लिम्बूलाई यमाहको एक थान मोटरसाइकल प्रदान गरिएको थियो ।
को हुन् गम्भीर राई ?
झापाको भद्रपुर–१० चन्द्रगढीका गम्भीर राई भन्ने बित्तिकै धेरैको दिमागमा फुटबल खेलको झल्को आउनु स्वभाविकै हो । सानै उमेरदेखि फुटबलप्रति निकै चासो दिएका गम्भीरले खेल क्षेत्रबाट नेपालको नाम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै चिनाएनन् उनले पनि खेल क्षेत्रमा आफ्नो नामलाई पनि अग्रस्थानमा राख्न सफल भए । चन्द्रगढीस्थित वीरेन्द्र माविबाट २०४४ सालमा एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरेका गम्भीरले उच्च शिक्षा अध्ययनलाई भने थाती राख्नुप¥यो । सानै उमेरदेखि फुटबल प्रति रुची राखेका गम्भीरलाई परिवारको साथ र सहयोगले झनै टेवा पु¥याएको उनको अनुभव छ ।
घर–गाउँमा खेल खेल्दै आएका गम्भीरले २०४२ सालबाट अन्तरमाध्यमिक विद्यालय स्तरीय खेलमा सहभागिता जनाएका थिए । त्यस्तै २०४५ सालबाट मेची अञ्चल अन्तर्गत नर ट्रफी कपको १९औं खेलमा हेटौंडामा, २०४६ सालमा पोखरा, २०४८ सालमा वीरगञ्जमा सहभागिता जनाएका गम्भीर २०४९ सालमा १६ वर्षमुनिको (अण्डर सिक्सटिन) मा सहभागिता जनाउँदै बंगलादेश गएका थिए । उनले उक्त समयमा भारत र पाकिस्तानविरुद्ध पेनाल्टी सुटआउटमा आकर्षक गोल गर्दै नेपाललाई विजयी गराउन सफल भएका थिए । अण्डर सिक्सटिनमा सहभागिता जनाए लगत्तै गम्भीर न्यूरोड टिम (एनआरटी) मा आवद्ध भए । एनआरटीमा सहभागिता जनाएका गम्भीर लिग चरणको खेलमा २६ वर्षपछि एनआरटी क्लब च्याम्पियन बन्दा एटेकिङ डिफेन्सको रुपमा खेलिरहेका थिए ।
गम्भीरले २०५३ सालमा थाइलेण्डमा भएको १९ वर्षमुनिको उमेर समूह (अण्डर नाइन्टिन) मा सहभागिता जनाउँदै मकाउबिरुद्धको खेलमा पनि पेनाल्टी सुटआउट मार्फत गोल गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा तीन गोल गरेका थिए । १६ वर्षसम्म फुटबल खेलेका गम्भीर अहिले प्रशिक्षकको रुपमा काम गरिरहेका छन् । गम्भीरले एनआरटी क्लबमा आवद्ध भएपछि २०५२ सालमा मालदिभ्समा भएको अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पनि सहभागिता जनाएका थिए । उनी २०५३ सालमा जनकपुर चुरोट कारखानाको क्लबमा समेत आवद्ध भएका थिए । त्यस लगत्तै २०५४ सालबाट दुई वर्षसम्म उनी मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबमा आवद्ध भएका थिए ।
२०५६ सालबाट मुनाल क्लब चन्द्रगढीको प्रशिक्षकको रुपमा आवद्ध उनले झापाका चर्चित खेलाडी कर्ण लिम्बूलाई समेत ट्रेनिङ दिएको बताए । दैनिक तीन सय रुपैंया पारिश्रमिक लिएका गम्भीरले खेल जित्दा १५ हजार रुपैयाँसम्म प्रप्त गरेको बताए । हालै मात्र हिरो कप उडिसा भारत २०१९को टिम व्यवस्थापकको जिम्मेवारी सम्हालेका गम्भीर खेल क्षेत्रमा धेरैको भविष्य उज्ज्वल रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्– पहिला–पहिला काम नहुनेले खेल्ने भन्नेहरु, खेल क्षेत्रबाट पनि नाम र दाम कमाउन सकिन्छ भन्नेमा पुगेका छन् । श्रीमती सम्झना, दुई छोरी जजिना र जियाका बुबा गम्भीर अहिले खेल क्षेत्रमा लागेकाले आफूलाई धेरैले चिनेको भन्दै देशको नाम राख्न आफूले खेलको माध्यमबाट पनि सफल भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । उनले झापाको बिर्तामोडमा जारी झापा गोल्डकपको प्रशंसा गर्दै डोमालाल रंगशाला देशकै उत्कृष्ट मैदान रहेको बताए । झापा गोल्डकपलाई अझ ब्यवस्थित गर्नका लागि स्थायी प्यारापिट निर्माण गर्न सुझाव दिएका उनले झापालीमा फुटबल प्रतिको मोह बढ्दै गएको बताए ।
को हुन् अस्मिता खवास ?
भालेकप खेल्दा खेल्दै सन २००२ मा राष्ट्रिय टिममा ‘डेब्यू’ गरेकी झापा मेचीनगर–१० धुलावारीकी अस्मिता खवास फुटवलको महिला प्रशिक्षक पनि हुन् । १३ वर्षकै उमेरदेखि राष्ट्रिय टिममा सहभागी भएर सन् २०१४सम्म निरन्तर फुटवल खेलेकी उनी अहिले महिला फुटवल प्रशिक्षकका रुपमा काम गरिरहेकी छिन् । ज्यामिरगढी माविमा अध्ययन गर्दागर्दै फुटवल खेल्न शुरु गरेकी अस्मिताले फुटवल खेलकै माध्यमबाट नेपाललाई विश्वसामु चिनाइन् । उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाललाई मात्र चिनाइनन् आफ्नो छवि समेत उच्च बनाएकी छन् ।
सन २००२मा नर्वेमा भएको नर्वेकपदेखि सन २००४मा चीनमा भएको एशियन गेम, सन् २०१० मा वंगलादेशमा भएको सागसहित विभिन्न देशमा गएर उनले फुटवल खेलेकी छिन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेल साग र साफ च्याम्पियनसिपमा भाग लिएकी उनी अहिले अण्डर १९ लागि महिला खेलाडी तयार गर्दैछिन् । भुटानमा भएको अण्डर १८ मा पनि महिला प्रशिक्षकका रुपमा उनले खेलाडी तयार गर्दै नेपालको प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन् । खेलको माध्यमबाट भारतलाई पराजित गर्ने उनमा ठूलो धोको थियो । उनको त्यो धोको गत वर्षमात्र पूरा भयो । भारतलाई हराउने सन् २०१०देखि कै सपना थियो– उनी भन्छिन्– गत वर्ष त्यो सपना पूरा भयो, हामीले हिरो कप जितेका छौं ।’
१४ डिसेम्बर सन २०१२ मा उनी राष्ट्रिय महिला फुटवल टिमको गोलकिपर थिइन् । त्यही बेला उनी दुर्घटनामा परिन् । जसका कारण फुटवल खेल्न उनलाई केही अप्ठ्यारो भए पनि उनले फुटवल खेल्न भने छाडिनन् । अन्ततः उनले आफूलाई नेपालको एक सफल महिला फुटवल खेलाडीका रुपमा उभ्याएरै छाडिन् । कक्षा ६मा अध्ययन गर्दागर्दै फुटवल खेलसँग मोहनी लागाएकी उनले अध्ययनलाई भने संगै अगाडि लान सकिनन् । हिमालय मावि धुलावारीबाट प्लस टु सकेकी उनले पढाइलाई भन्दा खेललाई नै रोजिन् । जसका कारण खवास एएफसीको ‘लाइसेन्स’ प्राप्त प्रशिक्षक, एन्फा झापाको महिला प्रशिक्षक र एन्फा केन्द्रीय प्रशिक्षक संघको सदस्य समेत भइन् ।
अस्मिताले महिला फुटवल खेलाडी उत्पादन गर्न भन्दै २०७० सालमा आफ्नै ठाउँमा सनसाइन महिला फुटबल क्लब नै स्थापना गरिन् । फुटबलका दक्ष महिला खेलाडीहरु उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ज्यामिरगढीमा स्थापना गरिएको क्लबको उनी संस्थापक अध्यक्ष रहेकी छिन् । तत्कालीन ज्यामिरगढी–७मा गजेन्द्रबहादुर खवास र शोभा खवासकी कान्छी छोरी उनी नेपाली महिला फुटबल टिमकी पूर्वगोलरक्षक हुँदै अहिले प्रशिक्षकका रुपमा आफूलाई स्थापित भएकी छिन् । दाजु र आमाले फुटबल खेल्न सहयोग पु¥याएको बताउने अस्मिता २००२ देखि २०१० सम्म लगातार राष्ट्रिय टिममा परिन् ।
नेपालको खेल क्षेत्र त्यसमा पनि महिला फुटवल सुधार्न आफू लागीपरेको बताउने अस्मिता फुटवलको पर्याय नै भएकी छिन् । त्यसमाथि पनि झापाली महिला फुटवलको उनी चम्किलो तारा भएको खेलकुद क्षेत्रका अगुवाहरु बताउँछन् ।
झापामा चौथो मगमग गोल्डकप प्रतियोगिता भइरहँदा खेल क्षेत्रको विकासका लागि भएको उत्कृष्ट कार्यको उनले खुलेर प्रशंसा गरिन् । उनले डोमालाल राजवंशी खेलमैदान नेपालका कुनै पनि खेल मैदानसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताउँदै उत्कृष्ट व्यवस्थापनका साथ तयार पारिएको रंगशाला र झापा गोल्डकप देशकै गहना भएको प्रतिक्रिया दिइन् । झापामा निरन्तर रुपमा गोल्डकप प्रतियोगिताको आयोजना गरिनुले सारा नेपालीलाई जोड्ने पुलको काम गरेको उनको भनाइ छ ।
को हुन् नरेन्द्रमणि लिम्बू
स्कुल पढ्दै गर्दा फुटबल खेलमा प्रवेश गरेका नरेन्द्रमणि बिर्तामोड ४ का स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ । सन् १९७९ मा बुवा रुपनन्द जबेगु र आमा धनकुमारी लिम्बूको कोखबाट हङकङमा जन्मेका नगेनले जिल्लास्तर हुँदै पूर्वाञ्चल र काठमाडौँको ए डिभिजन क्लबबाट समेत फुटबल खेलेर झापाको गौरवमा उचाइ थप्नुभयो । स्कुले जीवनबाटै फुटबल खेले पनि फुटबल बुझेरै खेलेको भने २४ वर्ष भएछ । उहाँले भन्नुभयो–, ‘मैले व्यावसायिकरुपमा फुटबल भने सन् १९९५ बाट खेलेको हुँ ।’
२०७१ सालमा झापा ११ एफसी खडा हुँदा उनी मुख्य खेलाडीका रुपमा थिए । झापा ११ को मिडफिल्डको जिम्मेवारी सम्हालेका नरेन्द्रमणि नियमित कप्तान प्रवेश कटुवालको अनुपस्थितिमा उहाँले पनि कप्तानी सम्हाल्नुहुन्थ्यो । दोस्रो गोल्डकपमा कटुवाललाई यो अवार्ड प्रदान गरिएको थियो । लिम्बूकै कप्तानीमा विराट गोल्डकप झापा ११ ले उचालेको थियो । त्यस्तै, माइभ्याली गोल्डकप, एन्फा कप, सुरुङ्गा गोल्डकप, कटारी गोल्डकप, काँकरभिट्टा गोल्डकपको उपाधि झापा ११ ले रक्षा गर्दा उनको भूमिका महत्वपूर्ण थियो ।
त्यस्तै, ०७२ सालतिर स्थानीय क्लब बिर्तामोड युनाइटेडको कप्तानी सम्हाल्दा फिदिम, पाँचथर, स्व. भीमनारायण स्मृति कपलगायत नगेनको भूमिका उल्लेखनीय रहेको थियो । नेपालको ए डिभिजन क्लब थ्री स्टार क्लबबाट समेत खेलेका उनको फुटबल करियर सुरुमा ब्वाइज युनियनबाट भएको थियो । हङकङमा रहँदा पनि डबल प्mलावर र फु किङ क्लबबाट समेत फुटबल खेल्नुहुन्थ्यो उहाँले । २०७४ सालबाट झापा ११ को टिममा नरहेका उनले डि लेभल लाइन्सेन्सको कोर्ष पूरा गरी रिजल्टको पर्खाइमा छन् । फुटबल जीवनको श्रेय भने उनले बुवा रुपनन्द जवेगुलाई दिनुभयो ।